လျင်မြန်စွာ လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > လျင်မြန်စွာ လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
လျင်မြန်စွာ လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို စီးရီး လျင်မြန်စွာ လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper auသို့mation.AOX ယူ ကြီးမားသော အရေးပါပုံ သို့ လျင်မြန်စွာ လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဒီဇိုင်း, နှင့် အဆိုပါ ပုံစံ အသင်းအဖွဲ့ ရှိပါတယ် အားကြီးသော စွမ်းအား ၏ ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ AOX ရှိပါတယ် ပြည့်စုံသော ပညာတတ် အိမ်ခြံမြေ အခွင့်အရေး နှင့် များသော စက်မှုလက်မှု မူပိုင်ခွင့်။ ကျွန်တော်တို့ excpect သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် အဆိုပါ အနား အနာဂတ်။
20 ~ 200 S က (2.5S, 5S, 10S Opotional) timeï¼ switching
2. Wide torque အကွာအဝေး: AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်းလေးပုံတစ်ပုံ၏ torque လျှပ်စစ် actuator turn 30Nm-5000Nm ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
3. Multi-ဗို့: AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်းလေးပုံတစ်ပုံ၏ဗို့အားလျှပ်စစ် actuator turn 220VAC, 380VAC, 110VAC နှင့် 24VDC နိုင်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်းလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့ capacitor: AC500V ဗို့အား, အက Capacitor ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်ချမှတ်။
1. AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်းလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator နှင့်အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ကိုစနစ်တကျ install နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီ။
6. AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်းလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်အဆို့ရှင်နဂိုအတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနည်းပညာသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။3တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်, 27 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်, 49 ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်4တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်စုစုပေါင်း 89 မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။2utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်းလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, gost, EAC, IP68 အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရယူထားပြီး
မေး: AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်းလေးပုံတစ်ပုံအဘို့သင့် Pack အသေးစိတ်ကိုလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဆိုတာဘာလဲ?
မေး: AOX-R ကိုစီးရီးအစာရှောင်ခြင်းလေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့သင့်ပေးပို့အချိန်ကဘာလဲ?
hot Tags:: လျင်မြန်စွာ လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်